Xashiishadda, Cuntada Qashinka ah iyo Cayilka • Daroogooyinka Inc.eu
Daraasad uu sameeyay nin dhaqaalayahan ah ayaa muujisay in sharci ahaanta dhirta ay saameyn weyn ku leedahay iibinta cuntada qashinka ah. Taasi, dabcan, waxay ahayd in laga filo, maxaa yeelay dadka badankood waxay dilaan laadadka ka dib marka wadajirka la shido. Ka dib jikada uma aad geli kartid si faahfaahsan.
Maya, markaa waxaad u aadeysaa sidii aad u soo buuxin lahayd nooc kasta oo fudud oo fudud sida ugu dhakhsaha badan ee suurogalka ah. Taasi waa wax aan micno lahayn, sida lagu sheegay daraasad uu sameeyay Michele Baggio, kaaliyaha borofisar ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha. Baggio wuxuu helay xiriir ka dhexeeya sharciyeynta haramaha iyo kordhinta isticmaalka cuntooyinka kaloriin sare leh. Waxay eegtay xogta ku saabsan iibsashada bilkasta ee keega, buskudka iyo qaar ka mid ah cuntooyin fudud oo ay ka buuxaan cusbo iyo sonkor. Maxay noqotay?
Xogta laga helay dukaamada in ka badan 2000 oo degmo 10-kii sano ee la soo dhaafay ayaa muujisay in iibsashada cuntada qashinka ah ay si aad ah kor ugu kacday sharciyeynta ka dib. Kadib sharciyeynta marijuana ee gobolada sida Oregon, Washington iyo Colorado, iibsashada jalaatada ayaa kordhay 3,1%, buskudka 4,1% iyo jajab 5,3%. Baggio: “Kuwani waxay umuuqdaan inay yihiin tiro yar, laakiin tiro ahaan waa muhiim waxayna sidoo kale muhiim u yihiin dhaqaale ahaan. Ma ihi mid taageersan ama ka soo horjeeda sharciyeynta. Waxaan kaliya xiiseynayaa in cawaaqib xumo aan la fileynin ay leedahay siyaasada.
Wali lama oga in sharciyeynta xashiishadda ay sidoo kale cawaaqib ku leedahay caafimaadka bulshada. In kastoo aad dabcan qiyaasi karto kuwan 'munchies'Caawinta dadka buurnida, waa dhibaato weyn oo caan ka ah Mareykanka.
Akhri wax dheeraad ah metro.co.uk (Source, EN)
Suuqa "Gray" Cusub: Maaddaama isticmaaleyaasha da'da ahi ay aad u xiiseynayaan, shirkadaha xashiishka waxay rabaan inay wax ka bartaan.
Xaqiiqdii waxay ahaayeen kuwo xiiseeya geedka. Waxay doonayeen inay ogaadaan waxa weed ku saabsan iyo sida ...
Socdaalka Marijuana - Kumaa u Guurey Xashiishadda Mareykanka iyo Sababta?
Socdaalka hareeraha marijuana ma ahan dhacdo cusub. Dadku waxay ka hadlayeen tan iyo 2013 markii ...